Etu ị ga - esi kwenye na ị na - eji ihe nchọgharị weebụ ọzọ | Site na Linux
Etu ị ga - esi kwenye na ị na - eji ihe nchọgharị weebụ ọzọ
O yiri ka akpachapụrụ anya, ọ bụghị ya. N'ezie, ọ bụghị. Enwere ọnọdụ mgbe ibe ma ọ bụ ọrụ jụrụ anyị ka anyị jiri ụfọdụ ihe nchọgharị ma ọ bụ ụfọdụ ụdị ihe nchọgharị.
Maka m, dịka ọmụmaatụ, na-arụ ọrụ, m ga-eji Firefox 2.5 (sic) mgbe ị na-eji ụfọdụ ngwa. Nke a pụtara na m ga-eji ụdị Firefox nke ochie ochie. Ebe ọ bụ na anaghị m amasị nke ahụ, achọtara m ụzọ iji nọgide na-eji ọmarịcha Firefox 4 m mana na-eme ka igwe ahụ kwenye na m na-eji Firefox 2.5 eme ihe ochie. Otu usoro ahụ na-arụ ọrụ maka Chrome / Chromium. Anyị nwere ike ime ka sistemụ ahụ kwenye na anyị na-eji Firefox 2.5 mgbe anyị n'eziokwu, anyị na-eji Chrome / Chromium kachasị ọhụrụ.
Ka anyị hụ otu esi eme ya ...
Dịka ihe niile na ndụ: nke a dị mfe, mana ị ga-ama etu esi eme ya. N'okwu a, ihe ọzọ dị ukwuu nke ndụ metụtara: ọ dị mfe, mana ị ga-amata otu esi achọ ntuziaka nke ga-agwa gị otu.
Kwere m mgbe m kwuru na akpaokwu anwansi na nke a bụ "Onye Ọrụ Onye Ọrụ." Ọ dịbeghị mgbe ndụ ha ọ bụla mere ha ide ihe dịka nke a ịchọta ozi banyere isiokwu a, ọbụnadị ndị ahụ maara bekee nke ọma. Isi okwu bụ na ozugbo ha pịnyere nke ahụ na Google, ntuziaka metụtara ya na ibe ga-ezo.
Yabụ kedu ka anyị si agbanwe Onye Ọrụ Anyị?
1.- Edere m banyere: config na adreesị mmanya.
2.- Pịa bọtịnụ ziri ezi wee họrọ New> Eriri (Ọhụrụ> Eriri). Edere m "izugbe.useragent.override«, Na-enweghị ruturu. Wee tinye uru maka ihe nchọgharị ịchọrọ iulateomi. Maka ndepụta zuru ezu, ana m akwado ka ị gaa na nke a saịtị.
También dị ndọtị maka Firefox nke na-enye gị ohere ịgbanwe Onye ọrụ gị dị mfe. Nke a nwere ike ịbụ ezigbo aka ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwee Onye Ọrụ Onye ọrụ oge niile.
Enweghị ụzọ "ntuziaka" iji gbanwee Onye Ọrụ Ọrụ gị na Chrome / Chromium. Iji mee nke a, ị ga-edezi faịlụ ọnụọgụ abụọ, nke na-abụghị ezigbo obi ụtọ ma dị mfe omume.
Yabụ, nhọrọ kachasị mma bụ iji mgbakwunye maka Chrome / Chromium na-enye gị ohere ịgbanwe Onye ọrụ gị dị nfe. Nke a nwere ike ịbụ ezigbo aka ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwee Onye Ọrụ Onye ọrụ oge niile.
Iji nyochaa na mgbanwe ndị mere ọrụ, ana m akwado ka ị gaa saịtị a nke onye ọrụ gị ga-apụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Etu ị ga - esi kwenye na ị na - eji ihe nchọgharị weebụ ọzọ
Nke ahụ pụtara na ọ na-arụ ọrụ. 🙂
Gbalịa iji Internet Explorer 7 ma ọ bụ Onye Ọrụ Kachasị Elu.
Ọ na-ekwu na ọ dịghị maka ikpo okwu m (Linux) nakwa na ọ naghị arụ ọrụ na Firefox 4.
Aga m na-achọ ihe yiri nke ahụ, daalụ agbanyeghị maka azịza ozugbo 😉
Zaghachi Alejandro Olivares Ramírez
Maxthom, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe nchọgharị naanị maka Windows na-eweta ọrụ a na ndabara, M nwalere na ọ naghị eme ihe ọ bụla ma enwere m obi ụtọ, na ọ bụrụ na nke atọ ya
Ana m efu data maka ntụgharị m ga-eji n'IE n'ihi na ụlọ ọrụ ahụ bụ onye mmekọ Microsoft na ihe niile na-arụ ọrụ dabere na ngwaahịa ha, ọ ga - abụrịrị, a manyere iji ihe nchọgharị 2 dị iche iche (na anaghị m eji ndị ahụ 2) xD
Nyaahụ m bipụtara post metụtara nke a na humanOS ... n'ezie maka Chrome / Chromium ị chọghị gbanwee ọnụọgụ abụọ! naanị ịtinye oke –user-agent = »Onye nnọchite Onye Ọrụ» na onye nnabata gị ... n'ihe gbasara Chrome 11 na Linux ọ ga-abụ ihe dị ka nke a ihe ga-adịgide na Chrome launcher:
/ opt / google / chrome / google-chrome% U –user-agent = »Mozilla / 5.0 (X11; U; Linux i686; en-US) AppleWebKit / 534.16 (KHTML, dị ka Gecko) Ubuntu / 10.10 Chrome / 11.0.696.50 Safari / 534.16 ″
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu, ị nwere ike ịkwụsị ebe a! http://comunidades.uci.cu/blogs/humanOS/2011/04/27/chrome-y-firefox-modifica-tu-user-agent/
nsogbu adighi, anyi biara i kene !!!
Agbalịrị m ya na Hotmail na Youtube ọ na - agwa m na m nwere ihe nchọgharị abosoleto (M ji Onye Ọrụ Onye Ọrụ Internet Explorer 4.0 na Arch Linux)
Ana m esonye n'ihe eM Di eM na-arịọ.
Achọrọ m inwe ike iji ntụgharị na Linux m.
Olileanya ha na-enye nkuzi banyere otu esi eme ya.
O yiri ka ọ rụọ ọrụ nke ọma, daalụ
Kedu ihe dị iche na etiti ederede bash n'iji sh na ./